Madaxweyne Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay Sheekh Axmed Madoobe (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Maxamed Farmaajo ayaa xalay xarunta Madaxtooyada waxa uu ku qaabilay Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Sheekh Axmed Madoobe oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ahaa mid saxaafada banaanka ka joogtay ayaa xubno ku dhaw dhaw Madaxtooyada sheegeen in looga hadlay arimo kala duwan ay kamid tahay guusha uu Farmaajo ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada Muqdisho.
Axmed Mdaoobe ayaa taageero balaaran u muujiyay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, waxa uuna u balan qaaday sida aan wararka ku heleyno in wada shaqeyn dhaw la yeelan doono Madaxweyne Farmaajo iyo xukuumada uu soo dhisi doono.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ahaa Hogaamiyaha kaliya ee ka maqnaa magaalada Muqdisho xiligii ay doorashada socotay, waxaana Madaxda kale maamul goboleedyada ay ahaayeen kuwa u dhae dhigtay u ololeenta qaar kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne.
Axmed Madoobe oo shalay dsoo gaaray magaalada Muqdisho ayaa u yimid ka qeyb galka caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo lagu wado in maalinta berito ah lagu qabto magaalada Muqdisho ayna kasoo qeyb galaan madax kala duwan.